३. वर्तमान अवस्था – नेपाल कानुन आयोग
३. वर्तमान अवस्था
मुख सम्वन्धी रोग नियन्त्रण गर्न सकिने भएतापनि नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मुख स्वास्थ्यको खराव स्थितिवाट गुज्रिरहेको छ । हालै भएको NCD RISK Factor Survey सन् २०१२-२०१३ ले एक चौथाई जनता मुखको पीडा र मुखको असहजतावाट प्रभावित रहेको देखाएको छ।
मुख स्वास्थ्यमा खासगरी दाँत किराले खाने, गिजा सम्वन्धी रोग र मुखको क्यान्सर जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेतापनि यसतर्फ उचित ध्यान पुग्न सकेको पाईदैन । यसका अलावा मानिसहरुको गुणस्तरीय जीवनयापनमा जन्मिदै भएका समस्या (खुँडें), शारीरिक संक्रमणका प्रणालीगत असरहरुका कारण मुखमा देखा पर्ने असरहरुले गुणस्तरीय जीवनयापनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
नेपाल पाथफाईण्डर सर्भे–सन् २००४ ले ५–६ वर्ष उमेर समूहका करिव ५८ प्रतिशत वच्चाहरु दाँत कीराले खाने रोगवाट उच्च प्रभावित रहेको देखाएको छ र यसलाई नेपालमा वच्चाहरुको मूख्य रोगको रुपमा पनि औंल्याएको छ । गुणस्तरीय उपचारविना दाँत विग्रने र झर्ने समस्याले पनि जीवनयापनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको पाईन्छ । उक्त विश्लेषणले गरीव र सीमान्तीकृत समुदायका सवै उमेर समूह यसवाट वढी प्रभावित भएको देखाएको छ । यस वाहेक Oro–Facial Trauma, खुँडेपन र HIV संक्रमणवाट मुखमा हुने समस्या पनि ठूलै रुपमा देखिएको छ ।
अहिले नेपाल आधारभूत मुख स्वास्थ्य सहित सवैको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (universal Health coverage) लाई अझ सुद्धढ गर्ने पक्षमा रहेको छ । हाल नेपालमा १२ वटा डेण्टल कलेजहरु संचालनमा रहेका छन् । वार्षिक करिव ३०० स्नातक दन्त चिकित्सकहरु देश र विदेशवाट उत्पादन भैरहेका छन् । पाँच वटा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानहरुवाट करिव ३० जनाले दन्त चिकित्साका विभिन्न क्षेत्रहरुमा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गर्दछन् । सो वाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रवाट संचालित ४ वटा संस्थाहरुवाट दन्त सहायकहरु तयार हुन्छन् । सन् २०१६ सम्ममा देश भित्रकै सवै डेण्टल कलेजहरुवाट उत्पादित जनशक्ति सँख्या प्रति वर्ष करिव ६५० पुग्ने देखिन्छ । दन्त चिकित्सा सम्वन्धि जनशक्ति वढ्दै गएपनि देश भित्रको वितरण असन्तुलित छ । राजधानीमा दन्तरोग विशेषज्ञ र जनसंख्याको अनुपात १:९,००० छ भने राजधानी वाहिर १:५६,००० छ । हाल नेपालमा पृथक डेण्टल काउन्सील नभएको अवस्थामा धेरै संख्यामा रहेका डेण्टल कलेजहरुको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा सम्वन्धनको समस्या पनि थपिएको छ ।
धेरैजसो नेपालीहरुका लागि मुख सम्वन्धी रोगहरुको उपचार महंगो पर्ने गरेको छ । सीमान्तीकृत तथा कम आय हुने जनसंख्याको लागि निजी क्षेत्रको दन्त स्वास्थ्य सेवा लिन नसकिने गरी उपभोग गर्न नसकिने गरी महंगो छ । देश भित्र अवैध सेवा प्रदायकहरुको संख्या पनि वढिरहेको छ । विरामीहरु परम्परागत उपचार पद्धति र अवैधानिक सेवा प्रदायकहरुकहाँ जाँदा उनीहरुको स्वास्थ्यमा उच्च खतराको स्थिति उत्पन्न भएको छ । हाल यस्तो अवैध उपचार कार्य रोकथामको लागि कानूनी प्रावधान नरहेको अवस्था छ । हाल नेपालमा दाँत र गिजाको रोगले प्रभावित जनसंख्या, मुख सम्वन्धी अर्वुद रोगवाट पीडित जनसंख्या एवं अवस्था वारे समग्र तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वीमामा मुख स्वास्थ्य वीमाको कुनै पनि व्यवस्था नरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
Views Today : 24732